In ka badan 50 Ruux ayaa ku geeriyootay Shil Gaari | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	In ka badan 50 Ruux ayaa ku geeriyootay Shil Gaari
In ka badan 50 Ruux ayaa ku geeriyootay Shil Gaari
written by warsan radio 10/12/2021
Gaari Nooca Xamuulka qaado ah oo ay saarnaayeen dad u muuqday inay ahaayeen Muhaajiriin ayaa ku dul-rogmaday Buundada ay marayeen Waddada weyn ee Koonfurta Mexico, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 53 qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay masuuliyiintu sheegeen.
Luis Manuel Moreno oo ah madaxa xafiiska difaaca madaniga ah ee gobolka Chiapas ayaa sheegay in ilaa 21 kamid ah dadka dhaawacmay ay qabaan dhaawacyo halis ah waxaana loo qaaday isbitaalada deegaanka.
Shilka ayaa ka dhacay wado weyn oo aada xarunta gobolka, waxaana Sawirro laga soo qaaday goobta muujinayeen dhibanayaasha oo daadsan laamiga iyo gudaha Gaariga xamuulka.
Dhibanayaasha shilka galay ayaa u muuqday inay ahaayeen muhaajiriin ka yimid Bartamaha Ameerika, inkastoo aan weli la xaqiijin dalalka ay u dhasheen. Moreno oo ka badbaaday shilka ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadkii badbaaday ay sheegeen in ay ka yimaadeen dalka deriska la ah ee Guatemala.
In ka badan 50 Ruux ayaa ku geeriyootay Shil Gaari was last modified: December 10th, 2021 by warsan radio
Dowladda Somalia oo shaacisay kiisas cusub oo COVID-19 ah
Maamulka Galmudug ayaa soo saaray amar lagu mamnuucayo ka ganacsiga Dhuxusha
Dhageyso : Warka Galab ee Idaacada Warsan
Ra’iisul Wasaare Rooble oo xilka ka qaaday Agaasimihii Shaqaalaha hay’adda NISA iyo Taliyihii Nabad Sugidda garoonka Aadan Cadde
Dhageyso:-Warka Duhur ee Idaacad Warsan